Lix qof oo Turki ah, sagaal Soomaali ah ayaa ku dhaawacmay qaraxii Afgooye
Wasiirka Caafimaadka Turkiga ayaa qoraal uu ku baahiyey bartiisa Twitter-ka ku sheegay in lix qof oo Turki ah oo laba xaaladdoodu ba’antahay ay ku dhaawacmeen qaraxaa maanta dhacay.
Waxa kale oo uu intaa ku daray in sidoo kale dadka dhaawacmay ay ku jiraan 9 Soomaali ah oo lagu dabiibayo Isbitaalka Racep Tayyip Erdogan [ waa dhakhtarkii hore ee Digfeer].
“Baabuur miidaame ah oo xawli badan ku socda ayaa galay goob ay Injineero Turki ah iyo askar booliska ahi ay ka qadaynayeen” ayuu yidhi sarkaal ka tirsan booliska oo la yidhaa Nuur Cali oo ay wakaaladda wararka ee Rueters soo xigatay.
Wasiirka arrimaha dibaddaTurkiga ayaa isna qoraal uu bartiisa Twitter-ka ku baahiyey ku sheegay in weerarad noocan ahi aanay ka joojinayn dagaalka ay kula jiraan aragagixisada, waa sida uu hadalka u dhigaye
Waxaanu intaa ku daray in ay mar walba garab taaganyihiin walaaladooda Soomaaliya.
Warbaahinta maxalliga ah ee Soomaaliya ayaa tebinaysa in “war qoraal ah oo lagu daabacay baraha Internet-ka Al-shabaab ayaa waxaa ay ku sheeteen Mas’uuliyada qaraxa, iyagoona sheegay inay ku dhaawaceen ilaa iyo 4 kamid ah Shaqaalaha Tukiga iyo Ciidamo ka tirsan dowladda.”
Ciidamada nabadgelyada Soomaaliya ayaa iyaguna mar sii horaysay sheegay in ururka Al-Shabaab ay Jimcihii isku dayeen in ay weeraraan Afgooye, hase yeeshee la caabiyey.